Turkiga oo digniin adag u diray Gen. Haftar – Idil News
Turkiga oo digniin adag u diray Gen. Haftar
Wasiirka arrimaha dibedda Turkey, Mevlut Cavusoglu ayaa maanta sheegay in go’aanka uu Jeneral Khalifa Haftar, ee ah inuusan heshiis xabad joojin ah la gelin dowladda Libya ee caalamka aqoonsan yahay, uu muujinayo cidda dagaalka dooneysa iyo tan nabadda rabta ee dalkaas.
Haftar, oo ah taliyaha Ciidamada Qaranka Libya, ayaa kasoo tagay magaalada Moscow, isaga oo aan saxiixin heshiis la qoray kadib wada-hadallo Russia ka dhacay Isniintii, sida ay sheegtay wakalaadda wararka TASS oo soo xiganeysa ilo-wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibedda Russia.
Haftar ayaa horey u weydiistay in la siiyo illaa subaxa Talaadada si uu go’aan uga gaaro heshiiska, kadib wada-hadallo aan toos ahayn oo uu la yeeshay ra’iisul wasaaraha Libya Fayez al-Serraj.
Isaga oo weriyayaasha kula hadlayey Ankara, ayaa wasiirka arrimaha dibedda Turkey, Mevlut Cavusoglu waxa uu sheegay in Turkey ay sameysay wixii ay kartay si ay u xaqiijiso xabad-joojin, waxaana uu intaas ku daray in haddii Haftar uu sii wado inuu sidan u dhaqmo, uusan wax macno ah lahayn shirka madaxeedka Libya ee la qorsheeyey inuu Berlin ka furamo Axaddda.
Ra’iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa Sabtidii sheegtay in shir-madaxeed ku saabsan arrimaha Libya ay Axadda soo aadan la yeelan doonto madaxda Russia, Turkey iyo Italy.​